डलर टिप्ने यात्रा -- ४
कब्जातन्त्रको रिहर्सल !
गाउँखाने कथा - ८ (Nepali Gau Khane Katha)
(डलर टिप्ने यात्राको पहिलो भाग यहाँ, दोस्रो भाग यहाँ र तेस्रो भाग यहाँ छ।)
तानाकाले भोलीपल्ट बिहानै जापान फोन गर्‍यो हाम्रो बारेमा समाचार सुनाइदियो तीन पानीले डुबाइदियो भन्दा पनि उतारिदियो भन्दा राम्रो होला । बल्ल हलुका मन भयो यो झुठको खेती बन्द हुँदा । त्यस पछी उनिहरु सित कुनै संपर्क भएन । त्यो बिचमा मैले होटेल को ब्यापार शुरुगरी सकेको थिए (लज ) भोटेबहालमा, भने नोकरी पनि पुनर्बहाली भैसकेको थियो । तर आफ्नो परीबर्तित जीवन शैलीले उपल्ला दर्जाका हाकिम लाइ औडाहा भएछ। ठुला हाकिम मोटर साइकलमा, आफु गाडीमा । दुई महिनामा बिना कारण ४ ठाउमा सरुवा, त्यस्तो पनि हुन्छ?, त्यो पनि त्यस बेला ६ हजार जती हात लाग्ने जागिर आँखा पनि लागेन र सदाको लागि नोकरी शिभ राम भुर्तेल अथार्त नमस्कार गरिदिएँ ।
आफ्नो नोकरीको प्रकृतिको एउटै फाईदा मेरो लागि भयो, त्यो हो जन संपर्क । प्रचुर प्रचार-प्रसारको फल स्वरुप नाम चलेका नेता, कार्यकर्ता, बहालवाला वा पूर्व सैनिक, प्रहरी का बरिष्ठ हाकिमहरुको चहल् पहल निक्कै हुन्थ्यो, सोचे भन्दा राम्रो कमाइ र त्यहा भा. रु. को बर्षात हुन थाल्यो । गोर्खालीले पैसा भे’छी के गर्छ ?, आबश्यक भए पनि नभए पनि जग्गा किन्ने घर बनाउने ? । मैले पनि सुरु गरे सडक नगिज घर बनाउन । त्यो काम ६० % पनि सकिएको थिएन कता महाकाली संधि मा राष्ट्र घात भो भनेर सडक का रेलिङ भाच्ने, तोडफोड गर्ने, भारतीय गाडी आगो लगाउने, एक होइन दुई होइन तीन दिन सात दिन सम्म नेपाल बन्द गर्ने काम हुन थाले पछी त को आउने नेपाल ?। स्वात स्वुत ब्यापार त चट्, १० % पनि होटेल मा गेस्ट आउन छोडे छुटेन पसिना अब ? घर हेर्ने कि १५ जना होटेल को स्टाफ को खर्च हेर्ने कि होटेल को भाडा तिर्ने कि ? टुप्पी ठाडो भै हाल्यो नि ? ।कन्त बिजोग होला जस्तो पो त ?अनी त बाँकी त एउटै उपाय छ बहिनी परिवार नियोजन भन्ने गीत जस्तो मुग्लान भास्सिने भन्दा उपाय देखिन र १९९५ को मे मा लाग्यो गोर्खे मान टिप्न अमेरिका हुँदै जापान फेरी ।
एक जना आफ्न्तको मा पुगियो उन्ले मेरोलागि कुरा गरिसके का रहेछन कामको कता हो होन्डा कम्पनी रे । त्यहा अर्का कलाकार सीत पनि भेट भयो । भोली पल्ट काम गर्ने ठाउँ मा गएँ राम! राम!! राम!!!, आफ्नै लागि भरे कहाँ को कामी को आरन जस्तो पो रेछ । होन्डा मोटर साइकल को साइलेन्सर पाइप मात्र चम्काउने काम । कामीको बिद्युतिय आरन रैछ त्यो । पहिले तार भ्एको चक्का ले टल्काउनु पर्ने फेरी नरम कपडा जस्तो भएको चक्काले टल्काउनु पर्ने । बोराको एप्रोन बेरेर छालाको पन्जा र रबरको बुट लगाइ काम गर्नु पर्ने, मुख मा कालो धुलो, चक्का एता उता चिप्लिदा हात मा घाऊ नै घाऊ भएका आफन्त लाइ हेरें, उन्को घाऊ ले मलाई हिजै पोलिसकेको थियो । यो ठाउँमा मेरो भाग्य टल्किने छाँट काँट देखिन र काम नगर्ने निधो गरी टोक्यो फर्किएँ । त्यहा एकजना भतिज पर्ने थिए अनिल ढुङेल् उन्ले मलाई एउटा नयाँ खोलेको भारतीय खाना, तर जापानिज साहु भएको रेस्टुरामा काम खोजिदिए र भने ईण्डियन जस्तो पेल्दैन र छिट्टै मेनेजर हुने चान्स छ । उताको साहु यताको प्लेट उठाउने ?, लेख्या हुन्छ देख्या हुन्न भन्या शायद यहि होला ? । बिकल्प पनि छैन, मैले हुन्छ भने अनिलले मलाई कावागुची भन्ने ठाँउको मालाबर रेस्टुरामा पुर्‍यायो । अङ्रेजी ओके ओके बाहेक फिटिक्कै नबोल्ने रहेछन साहु । कोठा पनि रहेछ राम्रै दुई जना कुक र मेरो लागि तीन कोठा भएको । बोल्न सिके पनि जापानिज लेख्न आउँदैन थियो १३५ आइटम भएको रजिस्टर्ड मा जापानिज भाषा लेखिएको थियो परेन फसाद ?। के गर्ने दिमाग खेलाएँ बल्ल बुद्धी फिर्यो, रजिस्टर्डको चार्ट माथि इङलिस लेखेर चिप्काइ दिएँ, तब काम गर्न सजिलो भयो । आफुले इङलिस नेपाली जापानिज शब्द कोश किनी गहन अध्ययन गरे र दुई महिना मा नै म ८० % बोल्न र १० % लेख्न सक्ने भएँ। रेस्टुरा सीत जोडीएका बिषय र आबस्यक शब्द हरु लाइ खोजी गरी पढेकोले काम मा गाह्रो भएन र साहु सीत कुरा गर्न सजिलो भयो । स्मरण रहोस जापान मा हिराकाना, काताकाना र खान्जी गरी तीन प्रकार को मिस्रित भाषा प्रयोग हुन्छ ।
त्यही काम गर्दा रेस्टुरामा नै दसैं तिहार नयाँ बर्ष आदी मनाइन्थ्यो नेपालीहरु सीत को भेटघाटको सानो केन्द्र थियो त्यो मालाबार रेस्टुरा । छुट्टीको अगिल्लो दिन साहुले सधैं अरु रेस्टुरामा लैजान्थे र बिहान ४ बजे तिर घर मा पुर्‍याई दिन्थे । मैले जीम्मेवारि लिएपछि उनी अर्को रेस्टुरामा ब्यस्त हुन थाले । यसरी लगभग दुई बर्ष त्यहा रमाइलो सीत बित्यो । नेपालमा आफ्नो तत्कालिन समस्या पनि पुरा भैसकेको थियो बगली अली अली मोटो हुदै आए पछी फेरी नेपालमै गै उही पुरानो वा सानो तिनो एक्स्पोर्ट ईम्पोर्ट को ब्यापार गर्ने भन्दै ‘जननी जन्म भुमिस्च स्वर्गादपी गरियसी’ जप्दै फर्किये नेपाल ।
यस पटक फर्कदा नेपाल अध्यागमन ले राम्रो सीत स्वागत गर्न खोजे को थियो सफल भएन । भयो के भने पासपोर्टमा आगमन छाप लगाउने बेलामा यसो ओल्टाइ पल्टाइ हेर्यो अनी एक छिन पर्खनुस भन्छ बा!, मैले सोधे किन ? म नेपाली नागरिक नपाल छिर्न पाउन्न किन रोक्ने ?, किन पर्खने ?, फेरी भन्यो तपाईं चुप लागेर बस्नुस । थाहा छ उ मलाई मुर्गा बनाउने कोशीसमा छ आफु छोटो समय त्यहा काम गरिसकेको मान्छे म किन डराउने उता संगै तालिम गरेको डियसपी दुर्ज कुमार राइलाइ देखी सकेको थिए त्यहाको हाकिम पनि धेरै पटक संगै तीन पानी खाइ सकेको थिए, मैले कठालो समातेर जुरुक्क उचालेर हुत्याएँ उस्को हाकिम को कोठा तिर त्यतिकै मा उस्को हाकिम पनि निस्किये र के भयो भने, मैले भने यस्ले मलाई किन रोकिराखेको छ ? दुबै ले मलाई शान्त हुन भने अनी हाकिम आँफैले छाप ठोकी दिए र सरि भने । दुर्ज कुमार र म गफ गर्दै ढोका सम्म आयौं त्यो ‘धरापे कर्मचारी’ छक्क पर्दै हेरी मात्र रह्यो ।
देशमै बसेर केही जीवन धान्ने ब्यवसाय गर्ने अठोट गरी फर्केको म, बर्ष दिन सम्म कतै बाख्रा पालन, कतै ट्रावेल एजेन्सी वा रेस्टुरा के गर्ने सम्भाब्य अध्ययन गर्दा गर्दै बित्यो प्रशासन, नेताहरुकोमा राष्ट्रको चिन्ता बोकेको प्रोजेक्ट बोकेर गयो पहिले नै घुस माग्दछन, घुस लिने दिने काम मा आफु परियो पृथ्वी नारायण को अनुयाइ ( घुस लिन्या र दिन्या दुबै मुलुक का दुस्मन हुन ?) सबै इजी मनि मात्र खोज्ने समाज, राष्ट्र लाइ फाईदा हुने काम गर्छु भन्दा पनि वास्ता नगर्ने पैसा पाए नहुने पनि हुने गरिदिने पैसा नपाए हुने पनि नहुने गराइ दिने। म घुस ज्यान गए नदिने कर्मचारी घुस नखाइ ज्यान गए पनि काम काम नगरि दिने मिल्यो त कुरो अब ?
के गर्ने के नगर्ने टुङो लागि सकेको थिएन त्यसै बेला अस्ट्रेलिया बाट एक जना आफन्त छुट्टीमा नेपाल घुम्न आएका थिए । अस्ट्रेलिया मा लामो समय बसेका पाका मानिस थिए उनी स्कलरसिप मा थाइल्यान्ड पढ्न गएर उतै बाट अस्ट्रेलिया पलायन भएका । घरमा आएको बेलामा त्यहाको अध्यागमन नीति, त्यहाको जीवन शैली । ब्यापारको सम्भाबनाका बारेमा बिस्त्रित रुपमा छलफल भयो । उन्ले एकदम आशा लाग्दो अनी मेरो ब्यापार गर्ने इच्छालाइ सहयोग गर्ने बिश्‍वासिला कुरा गरे । यो भेडा बाख्रा पाल्ने घुस्याहरुको पछी दौडने उकुस मुकुस हुने बातावरण लाइ स्वर्गादपी गरियसी ...... ' भन्ने सोचाइ छोड, गोर्खे चल अस्ट्रेलियन डलर टिप्न भाग भन्दै मनमा फेरी कुतकुती सुरु भयो । ती आफन्त ले मौखिक सहयोग मात्र होइन परे आर्थिक सहयोग पनि गर्छु भने पछि त मेरो पंखा पलाए झै भयो अनी कहिले उडु कहिले उडु भै’ गो । छिट्टो भन्दा छिट्ट्टो अस्ट्रेलियाको सिडनीमा भेट्ने बाचा गर्दै उनी लागे अस्ट्रेलिया, म उडे न्यु दिल्ली भिशा लगाउन ...... क्रमश
(यो यात्राको पाँचौ भाग यहाँ छ)
tapai ko sasmaran dherai ramro lagyo aru pani padna paune chhu bhanne aasha ma chhu